January 6, 2020 - नवयुग
Jan62020 by nawayugaNo Comments
दुई मात्र बच्चा जन्माउने चलन भएको अहिलेको समाजमा सबै बाबुआमाले सायद आफ्ना सन्तान एउटा छोरा र एउटी छोरी नै होऊन् भनी चाहन्छन् । हामीले पनि त्यस्तै रहर गरेका थियौं । पहिलो सन्तान छोरी भए पनि कुनै चिन्ता थिएन । अर्को सन्तान छोरा हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर जब अर्को सन्तानको समय आयो, हामीलाई छोराका लागि दबाब बढ्यो । फेरि छोरी भयो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता र अलि डर पनि थियो । मेरो तीन महिनाको गर्भ हुँदा हामी काठमाडौंको नाम चलेको अस्पतालमा परीक्षणका लागि गयौं । त्यसअघि छिमेकी दिदीले मलाई भन्नुभएको थियो, ‘त्यो अस्पतालका (फलानो) डाक्टरले हेरेर छोरा वा छोरी भनेको फरकै पर्दैन ।’ हामीलाई आफ्नो उत्सुकता मेट्नुपरेकाले तिनै डाक्टरलाई जँचायौं । अल्ट्रासाउन्ड गरिसकेपछि उनी कुर्सीमा बसेर केके लेख्दै थिए, मैले डराई–डराई सोधें, ‘छोरा छ कि छोरी, डाक्टर सा’ब ?’ उनले टाउको उठाएर मलाई पुलुक्क हेर्दै
बाँके — गोरु तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरी प्रशासन मौन रहेको भन्दै सोमबार नेपालगन्जमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । राप्रपा(राष्ट्रिय प्रजातान्त्रीक पार्टी)को युवा संघले नेपालगन्जको राजमार्गमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शनी गरेको हो। आइतबार राप्रपाका युवा संघ अध्यक्ष हुकुम केसीले राति साढे १० बजे गोरु तस्करी गरिएको गोप्य सूचना पाएपछि स्थलगत अनुगमनमा पुगेका थिए। जानकी गाउँपालिकाको बुढीयागाउँमा दुई ट्रक गोरु राखेर लैजाँदै गरेको उनले सुनाए। जिल्ला प्रहरी प्रशासन बाँकेका एसपी वीरबहादुर ओलीलाई जानकारी गराएर उनी घटनास्थलमा पुग्दा हातहतियारसहित कुटपिट गर्न मान्छे आएको केसीले जनाए। ‘पूर्व सूचना दिँदासमेत प्रहरी घटनास्थल पुगेन’, उनले भने, ‘प्रशासनले सुरक्षा दिन्छु भनेको थियो, त्यहाँ पुग्दा ट्रक घेरेर हातहतियारसहित गुन्डा बसेका थिए।’ उनका अनुसार एक ट्रकभरी गोरु राखिएको थियो। पटकपटक गाई र गोरु तस
बर्दिया — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय नेपालगन्जले १० हजार घूससहित वन सहायक अधिकृत आनन्दप्रसाद साहलाई पक्राउ गरेको छ । सोमबार दिउँसो बबई सव-डिभिजन वन कार्यालय, जयनगर बारबर्दियाबाट उनलाई पक्राउ गरेको अख्तियारका नेपालगन्ज प्रमुख गणेश गैरेले बताए । वन सहायक अधिकृत साहले काठको लगत मिलाई दिने भन्दै सेवाग्राहीबाट १० हजार घूस लिएको प्रमुख गैरेले जनाए। उनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि नेपालगन्जस्थित आयोगको कार्यालयमा लगिने भएको छ।
काठमाडौँ — राजपाले अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा केन्द्रमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन संयोजन समिति बनाएको छ । अध्यक्ष मण्डलको सोमबार बसेको बैठकले अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश–२ का पार्टीका उम्मेदवारद्वय मृगेन्द्रसिंह यादव र शेखरकुमार सिंह सदस्य रहने गरी समिति बनाएको हो । प्रदेश–२ मा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलको संयोजकत्वमा उम्मेदवारद्वय रहने गरी समिति बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। राजपा र सत्तारुढ नेकपाले तालमेल गरेर प्रदेश–२ मा २/२ सिट बाँडेका छन्। बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदातालाई आगामी माघ ७ र ८ गते महोत्तरीको बर्दिबासमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको संयोजक महतोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै महतोद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार पार्टी महाधिवेशन तयारी समितिको बैठक पुस
पर्सा — वीरगन्ज आईसीपीबाट गत वर्षसम्म जुस, जाम र स्पोर्ट्स सुज सर्वाधिक निकासी हुने गरेको थियो । चालु आवमा भने खजुर र भटमासको तेल बढी निकासी भएको छ । यस वर्ष मंसिर मसान्तसम्म ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको खजुर र भटमासको तेल भारत निकासी भएको भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ । गत आवको मंसिर अन्त्यसम्मको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा यो नाकाबाट खजुरको प्रशोधित तेल निकासी ५ र भटमासको प्रशोधित तेल निकासी झन्डै ७५ गुना बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यो नाका भएर २ अर्ब २ करोड रुपैयाँबराबरको १ करोड ७३ लाख लिटर खजुरको प्रशोधित तेल निकासी भएको थियो । चालु आवमा अहिलेसम्म ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको ६ करोड ५४ लाख ३९ हजार किलो तेल निकासी भएको छ । गत आवको मंसिरसम्म यो नाका हुँदै २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ५ हजार ४१ किलो भटमासको प्रशोधित तेल निकासी भएको थियो । चालु आवको मंसि
मध्यविन्दु नगरपालिका वडा नंं ७ मा रहेको नवजागरण बहुमुखी क्याम्पसमा मध्यविन्दु नगरपालिका ले एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग गर्ने भएको छ । स्नातकोत्तर सञ्चालनार्थ आयोजना हुन लागेको श्रीमद् भागवत तथा धन धान्याञ्चल ज्ञान महायज्ञ संचालन समयमा उक्त रकम सहयोग गरिने मध्यविन्दु नगरपालिका का प्रमुख चन्द्र बहादुर रानाले बताउनुभयो । आज नगरप्रमुख रानाले शिक्षा जस्तो विकासको मेरुदण्डमा आफूहरु लगानी गर्न उत्सुक भएको भन्दै नवजागरण बहुमुखी क्याम्पस लाई गुणस्तरीय सुनिश्चितता प्रत्यायन Q A A प्राप्त गरी छाड्ने र जिल्लाकै नमुना डिग्री कलेज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । क्याम्पसमा यही पुस २७ गते देखि माघ ६ गते सम्म धान्याञ्चल सञ्चालन हुँदैछ । केदारनाथ का पीठाधिश जगत गुरु श्री भिमाशंकरलिङ्ग शिवाचार्य महाराज एबम् युवा बाचक भागवत अलङ्कार पदवीले विभूषित पण्डित नेत्र प्रसाद पराजुली को मुखारविन्दब
कतिपय बच्चाकी आमाहरुले बच्चाको नियन्त्रित रिसको सामना गर्नुपरिरहेको हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरुले केही अनावश्यक मागहरु राख्छन् । ती मागहरुलाई पूरा गरिएन भने अचानक रिसाउन थाल्छन् । त्यसैगरी भोकै हुँदा अथवा निन्द्रा पूरा नभएको अवस्थामा समेत उनीहरुमा अनियन्त्रित रिस देखिन्छ । बच्चाहरुको रिस बढी हुँदा प्रँयः अभिभावकहरुको तनाव, चिन्ता अथवा निराशाको कारण बन्न पुग्छ । बच्चाहरुको रिसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु त्यति सजिलो कार्य होइन । के हो अनियन्त्रित रिस ? एकाएक रिसले भड्किने समस्या बालबालिकाहरुमा कुनैपनि रुपमा व्यक्त हुनसक्छ । जस्तै रिस, निराशा, रुवाई, चिच्याउनु, सामानहरु फुटाउनु, जमिनमा लडिबुडी गर्नु, दौडनु आदि । केही बालबालिकाहरु त श्वास नै रोक्ने, वान्ता गर्ने अथवा अचानक आवेशमा आउने जस्ता व्यवहार समेत देखाउँछन् । मुख्य रुपले एकदेखि ३ वर्षको उमेरका बालबालिकाहरुमा यस्ता समस्या
अनलाइनमार्फत आइफोन सपिङ गर्दा घर आइपुग्यो साबुन !
पछिल्लो समय अनलाइन सपिङले राम्रो बजार पाएको छ । व्यस्त जीवनशैलीका कारण मानिसले अनलाईन अर्डर गरेर सामान मगाउने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन बजारमा हुने भीडभाडबाट बच्नका लागि पनि यो उपाय राम्रो देखिएको छ । तपाईले पनि बेलाबेलामा अनलाइन सपिङ गर्ने गर्नु भएको होला ? विचार गर्नुस् ५५ हजार तिरेर आइफोन अर्डर गर्दा घरमा साबुन आइपुगेको यो घटना जस्तै हुन पुग्ला ! घरमै बसेर अर्डर गर्दा सामान आउने भएपछि गमी, धुवाँ धुलो सहेर बजार जान पनि परेन । तर कहिलेकाही यस्तो अर्डरले समस्या पनि निम्त्याउने गरेको छ । एक जना व्यक्तिले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत आइफोन अर्डर गरेका थिए । तर उनको घरमा आइफोनको सट्टा लुगाधुने साबुन आइपुग्यो । तर उनले उक्त साबुनको पैसा भने आइफोनकै मूल्यबराबर तिरे । सुन्दा तपाई अचम्ममा पर्नुभयो होला तर यो समाचार नेपालको भने होइन । यो घटना छिमेकी मुलुक भारतको हो जहाँ एक जना व्यक्तिले